OweBanyana ujabule iSafa icacisa ngamabhonasi
UREFILOE Jane umdlali weBanyana Banyana ubonga ukuthi isheshe yacaciswa indaba yemihlomulo ngaphambi kokuqala kwemidlalo ye-Awcon Isithombe: BACKPAGEPIX
Xolile Mpisane | June 23, 2022
UMDLALI weBanyana Banyana, uRefiloe Jane, ukholwa wukuthi ukushesha kucaciswe ngendaba yamabhonani ngaphambi kwe-Africa Women’s Cup of Nations (Awcon), kuzobenza bagxile ekwenzeni kahle emqhudelwaneni ngaphandle kokuzikhathaza ngendaba yemihlomulo.
Leli qembu lifulathele izwe ngoLwesibili ebusuku ukuyoqedela amalungiselelo omqhudelwano ozoqala ngoJulayi 2 eMorocco.
Ngaphambi kokuthi libhekise amabombo eMorocco umengameli weSafa, uDanny Jordaan, umemezele ukuthi kubekwe isamba sikaR10 million esibhekene nomqhudelwano.
UR800 000 uzosetshenziselwa izidingo zeqembu emqhudelwaneni, uR9.2 million ubhekane ngqo namabhonasi abadlali.
Umdlali ngamunye kubadlali abangu-23 abaseqenjini, uzohlomula ngebhonasi kaR400 000 uma iqembu likaDesiree Ellis liphakamisa indebe okokuqala ngqa emlandweni.
Kubukeka kubhekwe kakhulu ukuyinqoba indebe njengoba imali abazoyithola izokwehla uma behlulwa kowamanqamu. Bathenjiswe uR55 000 ngamunye uma beqhuzuka kowamanqamu, uR40 000 ngokuqeda endaweni yesithathu kube wuR30 000 ngokuphuma endaweni yesine.
UJane, ohola iqembu ngokuhlanganyela noJanine van Wyk, uthe ukuphumela obala ngezindaba zamabhonasi ngaphambi kokuqala komqhudelwano kuzosiza iqembu ukuthi ligxile kokumele likwenze enkundleni.
“Uhlale uthi (ebhekise kumengameli weSafa, uDanny Jordaan), uma siya emqhudelwaneni wufuna sigxile ekudlaleni, silungise zonke izinkinga esinazo ngaphambi komqhudelwano,” kusho uJane kwiSafa.net.
“Amabhonasi ngezinye zezinto obekumele sizilungise futhi ukufika kwakho uzosinika lesi sithembiso kulikhuthazile iqembu. Ngiyazi ukuthi ngaphandle kogqozi lokufuna ukuthola le mali, sizimisele ukulwela izwe lethu. Asizidlaleli thina kuphela kodwa simele nemindeni yethu, abangani nabanye abadlali.”
UJordaan mayelana nemihlomulo, uthe: “Sifuna iBanyana iqhubeke nokuqopha umlando futhi iguqule ibhola laseNingizimu Afrika.”
Ngaphandle kokulwela ukuba ngompetha base-Afrika, okunye okusemqoka kwiBanyana wukuthola ithikithi eliya kwiNdebe yoMhlaba eseNew Zealand nase-Australia, ngonyaka ozayo.
Amaqembu amane azongena kweyandulela owamanqamu azozibekisela indawo kwiNdebe yoMhlaba.
Amane azodliwa kuma-quarterfinal azophinde abhekane wodwa, kuthi amabili azonqoba angene emqhudelwaneni wokuhlungela iNdebe yoMhlaba namazwe aqhamuka kwamanye amazwekazi ngoFebhuwari, ngonyaka ozayo.
IBanyana ehlulekile wukuya kuma-Olympics nyakenye, ikhishwa yiBotswana, yacishe yayiphakamisa i-Awcon izikhawu ezinhlanu njengoba yafinyelela kowamanqamu ngo-1995, 2000, 2008, 2012 nango-2018.
Ngo-1995, 2000 nango-2018 yaguqiswa yiNigeria kowamanqamu, kwathi ngo-2008 nango-2012 yadliwa yi-Equatorial Guinea.
Ngesikhathi ibuya kwi-Awcon eyadlalelwa eGhana ngo-2018, abadlali bathola isheke likaR2.4 million lizohlukaniswa kubadlali abawu-21 ababeyingxenye yomqhudelwano.
Lokhu kusho ukuthi umdlali ngamunye wahlomula ngoR115 000 ngokufinyelela kowamanqamu ngalowo nyaka, okuyisamba esingaphezulu kukaR55 000 abazowuthola uma bedliwa kowamanqamu eMorocco.